Saddexda Xisbi oo Balanqaaday Inay ka Qaybgalayaan Dood Qaran | Dhaymoole News
Saddexda Xisbi oo Balanqaaday Inay ka Qaybgalayaan Dood Qaran
Hargeysa-(Dhaymoole):- Saddexda Xisbi Qaran ee UCID, KULMIYE & WADANNI ayaa la sheegay inay ballan-qaadeen ka qaybgalka Dood Qaran oo kooxda Dhiirigelinta (Inspire Group) lagu magacaabo qabanqaabadeeda waddaan.
Kulan oo shalay galab Kooxda Dhiirigelinta (Inspire Group) ku qabteen xarunta Makhtabada Somaliland ee Hargeysa, kana soo qaybgaleen dadweyne kala duwan oo dhallinyaro u badan ayay kaga hadleen ujeeddada ay u qabanayaan iyo natiijada ay doonayaan inay ka soo baxdo.
Mr. Cabdirashiid Ibraahim oo ka hadlayey kooxdan, ayaa sheegay inay hoggaamiyeyaasha saddexda xisbi ka heleen qoraalo ay kalsooni ku siinayaan ka soo qaybgalkooda dooda qaran, isla markaana uu soo magacaabay xisbi waliba laba xubnood oo hawsha qabanqaabada ka qayb qaadanaya.
Mr. Cabdirashiid wuxuu intaas ku daray in ujeeddada doodani tahay inay abuurto kalsooni bulshadu ku kala doorato barnaamijyada ololaha doorashada ee saddexda xisbi, si ay codkooda u siiyaan xisbiga ay ku qancaan barnaamijkiisa.
Dooda Qaran oo ayey sheegeen kooxda qabanqaabadu in lagu kala qaban doono gobollada dalka qaarkood, isla markaana ay haggi doonaan aqoonyahanno ka madax-bannaan siyaasadaha xisbiyada dalka. Waxaanay intaas ku dareen in wakhtiga ay qabsoomayso wadajir u go’aamin doonaan Guddoomiyeyaasha axsaabta qaranku.
Dhinaca kale, bulshadii ka soo qaybgashay kulankaas, ayaa fikradahooda siyaabo kala duwan ugu soo bandhigay, sida qof walba u xiisaynayo inay u dhacdo Dooda Qaran.